Zavatra tahiry fifanakalozana mihevitra Bitcoin fandefasana entana
Anarana Boerse, tompon'ny Frankfurt Stock Exchange, dia mihevitra fanatitra cryptocurrency entana, araka ny tatitra.
Raha niresaka tamin'ny orinasa iray hetsika tao London tamin'ny alarobia, Jeffrey Tessler, ny mafy ny lohan'ny mpanjifa, vokatra sy fototra tsena nanao hoe::
“Lalina isika any am-piasana izany.”
US nandefa fanadihadiana tsy ara-dalàna Bitcoin fanodinkodinana Vidy
Ny Sampan-draharahan'ny Fitsarana dia nanokatra fanadihadiana mikasika ny varotra tsy ara-dalàna, manokana na ireo mpivarotra heloka bevava manodinkodina ny vidin'ny Bitcoin, araka ny efa-olona tsara ny raharaha.
Federal no niara-niasa tamin'ny mpampanoa lalàna ny entam-barotra Trading hoavy Commission, ny ara-bola izay miandraikitra Sampanteny regulator mifatotra ho Bitcoin.
Ny tetika tsy ara-dalàna fa ny Sampan-draharahan'ny Fitsarana dia mifantoka amin'ny ahitana spoofing ary sasao varotra, izay fomba fanao izay tsy ara-dalàna Mety hisy vokany eo ny vidiny. In spoofing, ny mpivarotra ary avy eo dia manolotra didy manafoana azy ireo vidin-javatra indray mandeha mifindra amin'ny tanjona tiana hotratrarina.
Sasao po anjara ny ankizy mifraody varotra ny tena mba hanome diso hieritreritra ny tsena fangatahana izay lures hafa ny mitsoraka ao koa.
Ireo no endrika mifraody fa efa nandritra ny taona maro dalàna miezaka ny hanaisotra amin'ny hoavy sy ny equities tsena.
Thai banky iraisam-pirenena mamarana raharaham-barotra mampiasa blockchain
Thailand ny Krungsri banky nahavita nitarika ny raharaham-barotra miampita sisintany “amin'ny resaka segondra” amin'ny banky any Singapore mampiasa blockchain.
Ny fampiasana teknolojia izany amin'ny hoavy, dia hamela ny Singapore banky, Mitsubishi, ary angamba ny orinasa hafa “manatsara bebe kokoa ny fahaiza-miasa mahomby sy fitantanana liquidity hampihenana ny vola lany” Hoy ny banky.
Voalohany crypto fefy tahirim-bola nanomboka tany Aostralia
Aostralia rehetra Renivohitra no nandefa ny firenena voalohany cryptocurrency-mifantoka fefy tahirim-bola ho an'ny mpampiasa vola antsinjarany.
Tom Surman, mpiara-manorina sy ny talen'ny Aostralia-miorina ny fitantanana orinasa fampiasam-bola, nanao hoe::
“Mirehareha izahay mba ho iray amin'ireo mpaninjara voalohany cryptocurrency vola izay mahatonga ny teknolojia sy ny blockchain misy toy ny fandringanana ny fampiasam-bola isaky ny sisin'ny Australian. "
Araka ny Surman, Raha maro ireo Aostraliana no mitady ny vola amin'ny cryptocurrencies, ny tsy fisian'ny ara-teknika fantatrareo-dia ny fomba fisorohana ny ankamaroan'izy ireo avy any an-nomerika antsitrika rano vola.
Zavatra teknolojia goavana GMO mba hakodian'ny olona avy 7nm Bitcoin mpitrandraka
Zavatra IT goavana GMO Internet no nametraka ny hakodian'ny olona avy amin'ny harena ankibon'ny tany Bitcoin fitaovana mifototra amin'ny 7nm poti tatỳ aoriana amin'ity taona ity.
Ny orinasa hoy ny fandefasana vaovao mpitrandraka B2 Jona amin'ny 6 faobe famokarana ny ela hanaraka, ary ny entana manomboka ny volana Oktobra.
Ny fanambarana hoy ny fitaovana avo dia tokony hanome sehatra ny hashing-hery amin'ny herinaratra ambany fitakiana.
Coinbase mahazo crypto fifanakalozana Paradex & mikasa ny hanolotra asa ivelan'ny Etazonia
Coinbase, ny lehibe indrindra sehatra fifanakalozana crypto any Etazonia, efa nahazo sehatra fifanakalozana fitongilànana Paradex.
Paradex dia ataon'ny mpiara-to-mpiara fanompoana izay manome fahafahana ireo mpampiasa ny varotra cryptos mivantana avy amin'ny mpanjifany, fa tsy mampiasa foibe tolotra toy ny Coinbase, Gemini, sns. Noho izany, mpampiasa dia manana zo feno eo am-ponja ny famantarana sy ny Fiat capital.
Coinbase mikasa ny hanao ny sasany enhancements ny teknolojia sy ny hanomboka ny tolotra Paradex ny mpanjifa ivelan'ny United States.
Indrindra Czech angovo orinasa hanaiky Bitcoin vola
Ny iray amin'ireo lehibe indrindra entona voajanahary orinasa any amin'ny Repoblika Tseky, Prague entona, Nanambara ny fikasany hanaiky Bitcoin volana manaraka.
Ny angovo orinasa no hany orinasa ao amin'ny orinasa mba handray toy izany dingana.
Amin'izao, Prague Gas vatsy Mihoatra ny herinaratra 420,000 mpanjifa amin'ny entona.
Anjara amin'ny sisiny varotra Marg ...